Wondershare MobileTrans Maka Mac User Guide - Bido
OneDrive ndabere ka iOS
OneDrive ndabere ka Android
Azụ ruo Mac
Ndabere iOS ka Mac
Back Up Android ka Mac
Ndabere Symbian ka Mac
Back Up Winphone ka Mac
MobileTrans Maka Mac Guide: Bido
Wondershare MobileTrans Maka Mac-enye a ikpe mbipute na a zuru version. Ka ịlele ihe bụ ihe dị iche n'okpuru.
Dị ka utu aha aha ya bụ, na-ekpe ikpe version-ahapụ gị ime ihe, ma na-agaghị emeli, dị ka:
• N'ihi na atụmatụ nke "na ekwentị ekwentị Nyefee", i nwere ike na nyefee mbụ 5 kọntaktị.
• N'ihi na atụmatụ nke "ndabere gị ekwentị", i nwere ike iji zuru ọrụ dị ka zuru version ebe a.
• N'ihi na atụmatụ nke "Restsore si Backups", i nwere ike na weghachi mbụ 5 kọntaktị.
• N'ihi na atụmatụ nke "Ihichapu Your Old ekwentị", i nwere ike iji ya mgbe niile.
Na na version, ị pụrụ ịnụ ụtọ niile atụmatụ dị ka:
• N'ihi na atụmatụ nke "na ekwentị ekwentị Nyefee", i nwere ike nyefee nile di iche iche nke dịnụ data n'etiti gị na ngwaọrụ na-enweghị ókè.
• N'ihi na atụmatụ nke "ndabere gị ekwentị", i nwere ike ndabere ihe ọ bụla na ngwaọrụ gị.
• N'ihi atụmatụ nke "Restsore si Backups", ị nwere ike iweghachi ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
• N'ihi na atụmatụ nke "Ihichapu Your Old ekwentị", ị nwere ike ihichapu gị ochie ngwaọrụ iji chebe gị onye data site na-eri eri.
Wondershare MobileTrans Maka Mac bụ ezigbo mfe na-eji. Site isi window, ị nwere ike mfe ga-esi mara ebe ị ga-amalite dị ka gị mkpa.
Site isi window, ị pụrụ ịhụ na e nwere 4 majoy ọrụ. Ọzọ, ka ego ihe onye ọ bụla n'ime ha nwere ike imere gị.
Wondershare MobileTrans Maka Mac-ahapụ gị weghachi ndabere faịlụ si dị iche iche na isi mmalite dị ka:
Wondershare MobileTrans Awade ị na-enyere ihichapu ihe niile si gị ochie gam akporo ngwaọrụ, n'enweghị nsogbu na-adịgide adịgide, nke mere na ọ dịghị onye pụrụ weghachite ihe ọ bụla si gị ochie ngwaọrụ n'agbanyeghị ebe ọ na-aga.
Wondershare MobileTrans Maka Mac - Bido Video Guide